Tue, Mar 20, 2018 | 08:04:12 NST
11:42 AM (6 months ago)
ज्ञान प्रसाद बराल / साउदि अरबिया
प्रश्नः अजाद भिसा कस्तो भिसा हो ? कानुनि मान्यता पाएको छ कि छैन ? अजाद भिसामा विदेश जाँदा कति पैसा लाग्छ ? यो भिसामा कतार र साउदिमा कति बर्ष को श्रम स्वीकृती हुन्छ ?
उत्तरः मोहन अधिकारी, निर्देशक वैदेशिक रोजगार विभाग - आजाद भिसामा वैदेशिक रोजगारीमा जाने गरेको जानकारी हामीलाई पनि आएको छ। यसमा वैदेशिक रोजगार विभागको पनि कमजोरी भएको छ। तर यो भिसा छोटो समयको हुन्छ र रोजगारीमा जानेले यो भिसा पाउँदैनन्। आजात भिसामा गएर काम गर्नु हुँदैन।